चुनाव आयो- कोपिला - कान्तिपुर समाचार
मंसिर ३, २०७४ गणेश राई
काठमाडौं — यो वर्ष देशैभरि चरणबद्ध रूपमा निर्वाचन हुँदै छ । गएको वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते तीन चरणमा चुनाव भयो । त्यो ७ सय ५३ स्थानीय तहको चुनाव थियो । स्थानीय तह भनेको गाउँपालिका र नगरपालिका (महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकासमेत) हो ।
देशभरिमा २ सय ९३ नगरपालिका र ४ सय ६० गाउँपालिका छन् । निर्वाचनबाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, सदस्यहरू निर्वाचित भएका छन् । त्यसैगरी नगरपालिकामा मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यहरू निर्वाचित भएका छन् । हामीले बीस वर्षपछि जनप्रतिनिधि पाएका छौं ।
हाम्रो देश नेपालमा संविधान, २०७२ जारी भएपछि यसरी चुनाव भएको हो । यो संविधानले देशलाई ७ वटा प्रदेशमा बाँडेको छ । अहिले देशभरिमा ७७ जिल्ला छन् । सातै प्रदेशमा दुई चरणमा चुनाव हुँदै छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव हुन लागेको हो । यही मंसिर महिनाको १० गते ३२ जिल्लामा पहिलो चरणको चुनाव हुनेछ । अनि मंसिर २१ गते दोस्रो चरणको चुनाव ४५ जिल्लामा हुँदै छ । यो चुनावले प्रतिनिधि सभाका २ सय ७५ सदस्य चुन्ने छ । त्यसमा १ सय ६५ प्रत्यक्ष चुनिने छन् भने १ सय १० जना समानुपातिकबाट छानिने छन् । त्यसैगरी सबै प्रदेशका गरी प्रदेशसभामा ५ सय ५० सदस्य हुन्छन् । तर प्रत्यक्षबाट चाहिँ ३ सय ३० जना सदस्य प्रदेशसभाका लागि निर्वाचत हुने छन् । समानुपातिक सूचीबाट २ सय २० जना छानिने छन् । हाम्रो मुलुकमा यस्तो चुनाव पहिलोपटक हुन लागेको हो ।
चुनावलाई निर्वाचन पनि भनिन्छ । हाम्रो मुलुकको चुनाव गराउने निकाय निर्वाचन आयोग हो । चुनाव निर्वाचन कानुनअनुसार हुने गर्छ । चुनावको मिति तोक्ने र सुरक्षा दिने काम सरकारले गर्दछ । निर्वाचनमा धेरै राजनीतिक पार्टीले भाग लिन्छन् । धेरैवटा दलले चुनावमा भाग लिने भएकैले यस्तो पद्धतिलाई बहुदलीय व्यवस्था भनिएको हो । नेपाल बहुदलीय व्यवस्था र लोकतन्त्रसहितको गणतन्त्र भएको मुलुक हो । यसपालिको चुनावमा ४९ राजनीतिक दलले भाग लिएका छन् ।
चुनावमा उम्मेदवारी दिने व्यक्तिलाई उम्मेदवार भनिन्छ । मत दिने व्यक्ति मतदाता हुन् । कानुनअनुसार १६ वर्ष उमेर पूरा भएपछि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाइन्छ ।
नागरिकता पाएको व्यक्तिले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न पाउँछ । तर मतदानमा भाग लिन चाहिँ १८ वर्ष पुग्नुपर्छ । नामावली दर्ताको काम निर्वाचन आयोगले गर्छ । मतदान दिने उमेर पुगेका व्यक्तिलाई बालिग भनिन्छ । मतदान गर्न फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्र लिएर तोकिएको मतदान केन्द्रमा जानुपर्छ । मतदाता नामावलीमा नाम भएको र २५ वर्ष उमेर पुगेको व्यक्ति मात्र उम्मेदवार बन्न पाउँछ ।
‘बालबालिका प्रयोग नहोऊन्’
चुनाव भनेको उमेर पुगेपछि भाग लिन पाउने र उम्मेदवारी दिन पाउने लोकतान्त्रिक पद्धति हो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार राजनीतिक दलहरूले बालिग मतको अधिकार नपाएको व्यक्तिलाई यस्ता चुनावी गतिविधिमा प्रयोग गर्नहुन्न । बालिग हुन १८ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्छ । १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले कुनै पनि राजनीतिक दलको चुनाव चिह्न भएको झन्डा, चुनावी सामग्री लिएर आमसभा, भाषण र प्रचार– प्रसारका कार्यक्रममा भाग लिनुहुन्न ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादव बालबालिकाले पनि चुनावबारे बुझिराख्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘विश्वको भविष्य भनेकै बालबालिका हुन् । त्यसैले उनीहरूलाई लोकतान्त्रिक निर्वाचन शिक्षाबारे जानकारी दिनुपर्छ । तर, बालबालिकालाई कुनै पनि राजनीतिक दलको क्रियाकलापमा सहभागी गराइनुहुन्न । चुनावी क्रियाकलापमा पनि बालबालिकालाई प्रयोग गर्नुहुन्न । अभिभावक र शिक्षकले आफ्ना बालबालिकालाई राजनीतिक जुलुसमा सहभागी हुनुहुन्न भनेर सम्झाउन जरुरी छ । चुनावमा बालबालिका प्रयोग गरिँदा दुर्घटनासमेत हुन सक्छ । त्यसकारण पनि उनीहरूलाई चुनावी गतिविधिबाट टाढै राख्नुपर्छ ।
प्रकाशित : मंसिर ३, २०७४ १०:३०
मंसिर ३, २०७४ शाश्वत पराजुली
काठमाडौं — आमाले भन्नुभयो, ‘बुइँगलमा भूत छ ।’‘म गएर हेरूँ ?’ मैले भनें । ‘हुँदैन बा हुँदैन । माथि आउँदै नआऊ ।’ आमा एक घारी केरा बोकेर बुइँगलतिर जानुभयो ।
आमाले भन्नुभयो, ‘बुइँगलमा भूत छ ।’
‘म गएर हेरूँ ?’ मैले भनें ।
‘हुँदैन बा हुँदैन । माथि आउँदै नआऊ ।’ आमा एक घारी केरा बोकेर
बुइँगलतिर जानुभयो ।
‘आमा, भूतले धेरै केरा खान्छ हो ?’ मैले सोधें ।
‘हो बा हो, माथि नआऊ है,’ आमाले फेरि भन्नुभयो ।
अर्को दिन बा एक डालो आँप लिएर बुइँगलतिर लाग्नुभयो ।
‘बा, म पनि माथि आऊँ ?’
‘हुँदैन बा हँुदैन, बुइँगलमा त भूत छ,’ बाले पनि आमाले जस्तै लेघ्रो तानेर भन्नुभयो ।
‘बा, भूतले धेरै आँप खान्छ हो ?’
‘हो बा हो, तर माथि नआऊ है,’ बाले उसै
गरी भन्नुभयो ।
मलाई भूत हेर्न मन लाग्यो । फेरि कताकता डर पनि लाग्यो । सोच्न थालें, ‘हैन, यो भूत कस्तो होला १ केरा खान्छ, आँप खान्छ ।’ त्यसै बेला आमा एक ठेकी दही र एक हर्पे घ्यू बोकेर माथि जानुभयो ।
‘आमा भूतले दही पनि खान्छ, घ्यू पनि खान्छ ?’ मैले सोधें ।
‘हो बा हो । सबै खान्छ । तर तिमी माथि नजाऊ है,’ आमाले यसपटक पनि भन्नुभयो ।
मलाई भूत हेर्न चौपट्टै रहर लाग्यो । मनमा कुरा खेले, ‘हैन, साँच्चै भूत कस्तो होला ? आमा मलाई माथि नजाऊ भन्नुहुन्छ । आफूचाहिँ बुइँगलमा गइरहनुहुन्छ । बा पनि बुइँगलमा गइरहनुहुन्छ । के आमाबा भूतको साथी हो र ?’
मलाई भूत हेर्ने चौपट्टै रहर जाग्यो तर फेरि डर लाग्यो । बुइँगलमा जानै सकिनँ ।
एक दिन आमा छिँडीमै बसेर मेरो नेपाली किताब पढिरहनुभएको थियो । बा आँगनछेउको धारामा
आफ्नो भोटो धुँदै हुनुहुन्थ्यो । ‘लौ मौका यही हो’ भन्दै म बुइँगलतिर जान कम्मर कसें । तर फेरि डर लाग्यो, ‘आमा र बा दुवैजना बुइँगलमा भूत छ भन्नुहुन्छ । कसरी जानु ?’
निकै बेर भर्‍याङमै बसें । ‘आ, जे त पर्ला’ भन्दै ठूलो मान्छेजस्तै छाती तन्काएँ । अनि बिरालोको चालमा विस्तारै माथि गएँ । मुटु छिटोछिटो ढुकढुक गरिरहेको थियो । डराई डराई घरक्क घोप्टे उघारेँ । ‘आबुई १ भूत बाबै भूत...’ म त थरथरी भएँ ।
हत्तेरी, कहाँको भूत हुनु, एउटा परेवा भुर्र उडेर झयालतिर पुग्यो । मेरो मुटु भने जोडसँग हल्लिरहेको थियो । बुइँगल अँध्यारो थियो । फेरि मनले भन्यो, ‘बाफ रे १ भूत त छ कि क्या हो ?’
चाल मारेर बुइँगलको माझतिर पुगेँ । तर थाहा छ ? त्यतातिर त मगमग बास्ना पो आइरहेको थियो । बास्नाले भूतको कुरै बिर्सियो । मालभोग केरा पाकेको बास्ना आइरहेको थियो । भुँइमा चाङ मिलाएर राखिएका मालदह आँप मगमगाइरहेका थिए । अलि पर हर्पेको घ्यूको बास्ना झन् मीठो थियो ।
‘अहो १ त्यहाँ त खानेकुरै खानेकुरा पो रै’छन् त ।’ मैले केरा, आँप, दही, घ्यू मैले बाँकी राख्दिनँ भन्ने आमालाई थाहा थियो । बालाई पनि त थाहा थियो । त्यही भएर बुइँगलमा भूत छ भन्नु हुँदो रहेछ कि
अब समय किन खेर फाल्नु ? मैले चारवटा केरा खाएँ । दुइटा आँप सिध्याएँ । एक डाडु घ्यू पनि बजाएँ । मन थाम्न सकिनँ, ठेकीबाट हातैले दही निकालेर खाएँ । अनि ढयाउ गर्दै डकारें । लौ मार्‍यो, मेरो आवाजले भूत त भकारीबाट दौडँदै झ्यालतिर पुग्यो । ‘आबुई भूत १’ मेरो हंसले ठाउँ छोड्यो । अलि नियालेर हेरेको त केको भूत हुनु ? कालो बिरालो पो यता र उता गर्दै रहेछ ।
फेरि अलिकति दही खान मन लाग्यो । हातैले निकालेर खाएँ । अघाएपछि किन बसिराख्नु ? अब तल गएर भकुन्डो खेल्छु भनेर यसो भर्‍याङतिर जाँदै थिएँ । भर्‍याङको घोप्टे त आफैं घुरुक्क उघ्रियो बाबै । ‘आबुई भूत १’ त्यतिबेला म चौपट्टै डराएँ । घोप्टे उघारेर भूत त माथि पो आयो बाबै ।
हया, कहाँका भूत हुनु ? आमा पो हुनुहुँदो रैछ । तर अचम्म, आमाले आत्तिँदै भन्नुभयो, ‘भूत...भू...त..१’ आमा डराउँदै भर्‍याङबाट तलतिरै ओर्लन थाल्नुभयो ।
अब हाँस्ने पालो मेरो थियो । आमाले मलाई चिन्नुभएनछ । बुइँगलको अँध्यारोमा मेरो मुख मात्र देखिएछ त्यो पनि दही लतपतिएको, सेतै । मैले फेरि ठूलो आवाजमा ‘ढयाउ’ गर्दै डकारें । त्यतिबेला आमा आत्तिँदै छिँडीमा पुगिसक्नुभएको थियो ।
मनाइयो चाइनिज दिवस